Allgedo.com » 2012 » October » 05
Home » Archive Daily October 5th, 2012
Dagaal uu qasaare ka dhashay oo xalay ka dhacay Garbahaarey
Garbahaareey, Somalia (AOL) – Habeynimadii xalay waxaa magaala madaxda gobolka Gedo ee Garbahaarey ka dhacay dagaal dhaliyay qasaare. Goob jooge markii uu dagaalku dhacay ku sugnaa Garbaaarey oo AOL lasoo xariiray ayaa sheegay in maleeshiyada Al-shabaab oo weerarka soo qaaday ay u suurtagali weysay ujeedkoodii ahaa in ay magaalada qabsadaan, balse dagaakaas xalay dhacay uu ka dhashay qasaare...
Warbixin gaar ah oo la xariirta magaala madaxda Jubbada Hoose ee Kismaayo.
Magaalada Kismaayo waxay taallaa xeebta gobolka Jubada Joose, oo dhaca koonfurta Soomaaliya, isla markaasna waa caasimadda sadexaad ee dalka Soomaaliya. Kismaayo ayaa sidoo kale waxay tahay magaalada madaxda gobolka Jubada Joose. Waa magaalo aad istaraatiiji u ah oo leh garoomo diyaaradeed, dakad caalami ah iyo jidad magaalada Kismaayo ku xira gobollada iyo degmooyinka kale ee dalka. Magaalada Kismaayo...
Gudigii Ra’iisul Wasaare Gaas U Magacaabay Masiibooyinkii Ka Dhacay Baladweyn Oo Maanta Shir Muhiim Ah La Yeeshay Hay’adaha Samafalka
Muqdisho, 05, Oct, 2012…Waxaa maanta shir isugu yimid Gudigii wasiiro ah oo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali u magaacabay kasoo talo bixinta iyo isku duba ridka gar-gaarka la gaarsiinayo dadka ku waxyeeloobay fatahaaddii ka dhacday magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, wuxuuna Gudigu maanta kulan la qaatay in ka badan 20 Hay’adood oo isugu jira kuwa caalami...